Privacy မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးထားတဲ့ Data Policy အသစ်တစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Facebook – AsiaApps
April 23, 2018 April 23, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Privacy မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးထားတဲ့ Data Policy အသစ်တစ်ခု ထပ်မံပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Facebook
ကမ္ဘာအကြီးဆုံး Social network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook က လစဉ် အသုံးပြုသူ ၂ ဘီလီယံကျော်ရဲ့ အချက်အလက် စုဆောင်းမှု Data Policy ကို ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။ Data Policy အသစ်ကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လို စုဆောင်း၊ အသုံးပြုသလဲဆိုတာ ရှင်းလင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ပေါ်လစီအသစ်မှာ စကားလုံးပေါင်း ၄၂၀၀ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်က လူတိုင်း နားလည်သဘောပေါက်မယ့် စကားလုံးတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြထားပေမယ့် နားလည်ဖို့လိုသေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖော်ပြချက်တစ်ခုစီမှာ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကြံပြုချက်၊ ကြော်ငြာ နဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အတွက် ဘယ်လို သုံးလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Facebook က အသုံးပြုသူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်နေရာကနေပြီးယူတာလဲ?
အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို facebook ကနေပြီး မှတ်သားထားတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို လူတိုင်း သိပြီးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအချက်တွေကို ဘယ်နေရာတွေကနေ ရတာလဲဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူသိပ်ပြီးရှိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ Facebook ရဲ့
အချက်အလက်သိမ်းဆည်းပုံက အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့ Timeline ပေါ်တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကနေပြီး အချက်အလက်တွေရှာယူတာပါတဲ့နော်။ ဒါ့အပြင် friends တွေ နဲ့ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ချက်တွေ ( ဥပမာ – comments ပေးခြင်း)၊ Pages တွေ နဲ့ like လုပ်ထားတဲ့Posts တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့တာတင်မကသေးပါဘူး ကုမ္ပဏီဘက်က အသုံးပြုသူရဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနဲ့၊ တက်ဘလက်ခ် တွေဆီကနေ မတူညီတဲ့ အချက်အလက် (၇) မျိုးကိုလည်း စုဆောင်းပါသေးတယ်။ သူတို့တွေထဲမှာ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေ၊ ဘက်ထရီ ဘယ်လောက်ထိ လျောနည်းနေပြီလဲဆိုတာနဲ့ ဖုန်းထဲမှာ storage ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေအထိ မှတ်သားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် network တစ်ခုထဲနဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ devices တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Wow… facebook က အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုတောင်လိုက်စုနေရတာတုန်း။XD
ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့… အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီကိုမှ ရောင်းချမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ အခုလို အချက်အလက်တွေ လိုက်ပြီးစုနေရတဲ့ အကြောင်းကလည်း facebook သုံးသူတွေရဲ့ ဝါသနာ၊ အကြိုက်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ဆက်သွယ်မှုတွေကို သုံးပြီး အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ads၊ offers တွေနဲ့ အခြား sponsor content တွေ ကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အကောင့်ဖျက်ပြီးရင် Facebook ကအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ သိမ်းထားမှာလဲ?
Facebook ကနေ သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖျက်ပစ်ချင်ရင်တော့ Account ကို Deactivate လုပ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ လုံးဝကို delete လုပ်ပစ်ရမှာပါ။ Delete လုပ်လိုက်ရင်တောင် Timeline မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ posts တွေနဲ့ status တွေလောက်ပဲ ပျက်သွားမှာပါ။ အခြားသူတွေဆီမှာရှိတဲ့ အချက်အလတ်တွေကတော့ ဆက်ပြီးရှိနေမှာပါ။ ဥပမာ – အခြားသူတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ posts ကို share ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပျက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် acc ထဲမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေပဲပျက်သွားမှာပါ။
အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်တောင်မသိတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကျန်နေဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် acc ကို Deactivate, delete လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အချက်အလက်တွေက အလွယ်တကူပျောက်သွားမယ်လို့ လုံးဝမထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ အကယ်၍ သင်က privacy ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ်ရင် လျို့ဝှက်ချက်တွေကို လူသိမခံချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်
တစ်ခုတည်းသောအချက်က facebook အသုံးပြုတာကို စွန့်လွှတ်ဖို့ပါပဲ။… ကဲ… Asiaapps က ဘော်ဘော်တို့ရေ ဘယ်လိုလဲ facebook သုံးတာကို စွန့်လွှတ်မလား…အချက်အလက်တွေကို ဆက်ပြီး အသိမ်းခံမလား (?)
အခု ရေးသားထားတဲ့ articles ထက်ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ရင် facebook ရဲ့ Data Policy မှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ setting ထဲက Privacy Shortcuts ထဲဝင်လိုက်ရင် အောက်ဆုံးမှာ Data Policy ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Data policy, Facebook
OnePlus6edition အတွက် “The Lab” ဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ OnePlus